बीओकेको संस्थापक शेयर लीलामीमा | गृहपृष्ठ
Home बजार बीओकेको संस्थापक शेयर लीलामीमा
बीओकेको संस्थापक शेयर लीलामीमा
काठमाडौं (अस) । बैङ्क अफ काठमाडौं (बीओके)ले मङ्सिर २२ गते शुक्रवारदेखि संस्थापकतर्फको ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता शेयर लीलाम बढाबढमा विक्री गर्दै छ । बैङ्कले फेस भ्यालु रू. सयलाई आधार मानेर संस्थापकतर्फको उक्त शेयर लीलाम बढाबढमा विक्री गर्न लागेको हो । यस शेयरमा मङ्सिर २९ सम्म मात्र आवेदन दिन पाइनेछ । यसअघि बैङ्कले रू. सय अङ्कित मूल्यमा प्रिमियमबापत रू. १ सय ६६ थप गरेर रू. २ सय ६६ लाई आधार मानी लीलामीमा विक्री गर्ने बताएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले न्यूनतम रू. सयलाई नै आधार मानेर लीलामी गर्न अनुमति दिएपछि बैङ्कले सोहीअनुरूप लीलाम विक्री गर्न लागेको हो । यस शेयरमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न चाहनेले न्यूनतम सय कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि पेश गर्न सक्नेछन् । आवेदकले विक्रीप्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्किङ लिमिटेड, नारायणचौर नक्साल तथा बैङ्क अफ काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालयसँगै अधिकांश शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन पाउनेछन् ।
बैङ्कले संस्थापक शेयरधनीहरूको स्वामित्व ५१ दशमलव ४९ प्रतिशत कायम गर्ने उद्देश्यले एफपीओ जारी गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । हाल बैङ्कको संस्थापकतर्फ ४५ दशमलव ६४ र सर्वसाधारणतर्फ ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । यस बैङ्कको चुक्तापूँजी चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्म रू. ५ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख ७६ हजार रहेको छ । शेयर लीलाम विक्रीपछि भने बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ६ अर्ब २४ करोड ५३ लाख ८२ हजार पुग्नेछ । पहिलो त्रैमासमा बैङ्कले रू. २२ करोड ४० लाख ४६ हजार नाफा आर्जन गरेको छ ।